Ndị uweojii na-eyi uwe eji eme ka Nchedo na Nchekwa Nzuzo - OMG Solutions
Ahụ uwe ojii Worn Cameras bulie Nchebe na Nchebe nzuzo
N’otu aka, igwefoto ndi ahu n’egosiputa emeela ka ndi mmadu mara nke oma n’ile anya ha, ndi a ewulitela nche na nzuzo. Ndị na-akwado iwu na ndị mmanye iwu zuru oke iji hụkwuo ndị uwe ojii na-ese kamera. Uweojii na ndị uwe ojii yi kamera na-esonye na mbelata ojiji ndị uwe ojii jiri ihe ike; Esere vidiyo site na igwefoto ndị uwe ojii ewetara ihe ndị bara uru nye ndị na-enyocha ebubo na-adịghị mma maka ndị uwe ojii. Yana abamuru nke kamera ndị uwe ojii, enwere nnukwu okwu. Enwere nnukwu mkpa maka idozi nsogbu nzuzo na nchedo n'ihi na ndị a na-aghọwanye ụbọchị kwa ụbọchị.
Dika akuko nke Sky, ndi uwe ojii United Kingdom na-eji igwefoto eyi ahu site na ulo oru Evidence.com. Companylọ ọrụ a na - ebugote ihe nkiri na ịntanetị na akpaghị aka. Companylọ ọrụ ahụ bụ mgbakwunye nke TASER nke na-emepụta ngwaọrụ ndị ama ama maka ọkụ eletrik. Onye nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ kwuru na a na-echekwa nchekwa na nchekwa nke fim ahụ, onye na-ahụ maka ndị ọrụ na-ahụ maka nchekwa, Jack Dromey na-arịọ maka mmesi obi ike site n'aka odeakwụkwọ ụlọ. Isi okwu nkatọ ahụ bụ Evidence.com jiri igwe ojii igwe ojii nke atọ akpọrọ aha dị ka Ọrụ Ntanetị Amazon. Nke a mepere arụmụka ọhụụ banyere ọnọdụ nke fim ahụ yana ohere ọ nwere ike ịbụ na ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ha metụtara nwere ike ịnweta ozi nkeonwe. Evidence.com dị ka ọ na -ewere ụfọdụ nchekwa nchekwa ezi uche dị na ya, na-eleba anya na ọrụ nchekwa ha kwuru. Izo ihe nzuzo bu ihe di ezigbo mkpa na igwekota igwe ojii, obughi n’uche maka nnabata. Otu ụdị igwe ndị na-enye nguzogide megide mfu data-dịka mbipụta dị iche iche jikọtara ya na mmepe nke teknụzụ nchekwa data ndị ọzọ na - eme ka ọ sie ike ijide n'aka na ehichapụla data kpamkpam.
Eleghi anya ihe nzuzo ndị ọzọ dị nkọ ndị uwe ojii na-ese. Ọ bụrụ na anyị na-atụle ihe ngosi sitere na igwefoto ahụ na-ahụ maka ihe gbasara ndị uwe ojii, oge awa nke ịkekọrịta mmekọrịta nke ndị aka ha dị ọcha na ndị uwe ojii. Ọ bụghị ihe siri ike ịkọ ụdị ọnọdụ ndị ọrụ uwe ojii na-etinye kamera mmadụ na-abanye n'ụlọ mmadụ wee pụọ na-enweghị njide. Agekwụ nke nzukọ ahụ nwere ike ikpughe mmechuihu ma ọ bụ ozi nzuzo banyere onye nwe ụlọ.
N'afọ gara aga na Nọvemba, otu akụkọ bịara na ngalaba ndị uwe ojii Washington na-enyocha usoro iwu ha banyere igwefoto dash na kamera ahụ tupu mmụba na arịrịọ maka vidiyo site na ọha na eze site na arịrịọ ọha. Na Washington na ọtụtụ steeti ndị ọzọ nke United States America, ọha na-atụle ndekọ igwefoto ahụ mmadụ n'ihe ize ndụ ịhapụ ya mgbe ha rịọrọ.
Ndị otu ụlọ North Dakota na-agbakọta ọnụ na iwu ga-ewepụ ihe ndekọ vidiyo ndị uwe ojii nke ime ụlọ nkeonwe na arịrịọ ndekọ ọha. Onye otu North Dakota House Kim Koppelman wepụtara iwu ahụ ma kwuo na iwu ga-echebe ndị nkịtị n'ọnọdụ dị ka nke m kpọtụrụ aha n'elu. Dabere na akụkọ ahụ, Maazị Koppelman webatara iwu ahụ na arịrịọ nke ndị uwe ojii West Fargo Chief Michael Reitan. Reitan na Koppelman nwere nchegbu dị mkpa na nzuzo nke ndị nkịtị, mana onye nkịtị nwere ike inwe ezigbo mmasị ịhụ vidiyo vidiyo ndị uwe ojii mere n'ụlọ ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na o kwenyere na ndị uwe ojii merụrụ ala ahụ ma ọ bụ na-akpa àgwà ọma.
Conor Friedersdorf dere usoro iwu maka igwefoto ahụ na Atlantic.
Ọ tụrụ aro:
Ndị otu nke na-apụta na vidiyo vidiyo kamera ahụ nwere ike ịrịọ ka e mechie ya n'ọtụtụ oge - ọ bụrụ na ha bụ onye akaebe ma ọ bụ onye omekome, dịka ọmụmaatụ - ma ọ bụrụ na enweghị ndị nkịtị na vidiyo vidiyo, mgbe ahụ onye ọ bụla so na pịa ma ọ bụ ọhaneze nwere ike ịnọ na-ele ya.
O kwuru na ya ga-agbatịkwu ikpe ụfọdụ ma nwee ihe ndị metụtara ndị uwe ojii na-eweghara ime ụlọ nkeonwe. Mama Jones 'Kevin Drum tụrụ aro ka atumatu igwe mmadụ dị iche iche wee nọrọ ebe a na-eme ihe nkiri vidiyo a na-eme n'ihu ọha na maka ihe osise na-enwetara n'ime ihe onwe. Ihe ọ bụla ndị uwe ojii na-etinye na ngalaba ndị uwe ojii na ndị na-eme ntuli aka na-eme ya, ha ga-edorịrị anya oge mgbe vidiyo vidiyo nke ụlọ nkeonwe ga-adịrị ọha na eze. Nke a dị oke mkpa n'ihi na, dịka Friedersdorf si kwuo n'isiokwu ya, ngalaba ndị uwe ojii anaghị adịkarị njikere iwepu ụkpụrụ ngosipụta foto kamera ahụ ha (ọ bụrụ na ha nwere otu ọ bụla).
Mgbe onye uwe ojii kwesịrị ịgbanyọnụ igwefoto eyi ya? Jay Stanley na ACLU ewepụtala amụma banyere ya. Otu onye uwe ojii kwesịrị ịgbanyọnụ igwefoto ahụ ya nwere n’oge mmalite nke ndị mmanye iwu ọ bụla ma ọ bụ nzute nyocha dị n’etiti otu onye uwe ojii na ndị otu yana ọhaneze mgbe ọ zara oku maka ọrụ. Nke ahụ ga-agụnye ajụjụ ọnụ na nnabata, nyocha njide, njigide ọnwụ, nkwụsị, mmebi iwu nke ụdị ọ bụla na nzukọ ọ bụla nke na-eyi egwu.
Nke a bụ atụmatụ dị mma, ọ bụ ezie na ọ naghị elebara ihe ekwesịrị ime ma ọ bụrụ na ụdị atụmatụ a dị n'ọrụ na onye ọrụ uwe ojii anaghị enwe igwefoto ahụ ya n'oge nzute. Agbanyeghị, Stanley dere na ọ bụrụ na ngalaba ndị uwe ojii nwere atụmatụ ime ihe na-achọ ka ndị uwe ojii nwee igwefoto ahụ kwesịrị ịdị na-eme ya:
Ihe a chọrọ [iji gbanye igwe mmadụ mgbe mmekọrịta ya na ọha na eze] ga-enwerịrị ezé metụtara ya - ọ bụghị naanị n'ihe egwu nke ịdọ aka na ntị kamakwa ikekwe iwu nkewapụta maka ihe akaebe ọ bụla enwetara na nnọkọ a na-ekwenyeghị na ya (maka ndị uwe ojii nọrọla na mbụ nyere igwefoto, belụsọ ma enwere nnabata iji gosi na ọdịda agaghị. Zọ mmanye ọzọ nwere ike bụrụ na achọrọ na mgbe ọ bụla ebubo na onye uwe ojii tinyere igwefoto maka ebubo adịghị mma, ịdekọghị ihe omume ahụ ga-eme ka ọ bụrụ onye uwe ojii.
Ihe nsonaazụ ndị a nwere ike zuru ezu iji gbaa ndị uwe ojii ume ka ha na-atụgharị igwefoto ahụ mgbe niile mgbe gị na ndị mmadụ na-emekọ ihe, ọ bụ ezie na ọ gaghị abụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na enwere ezigbo ndị uwe ojii na-echezọ ịgbanye igwefoto ahụ, ọkachasị mgbe ewepụtara ha na ngalaba. . A ga-eji ihe dịka ndị uwe ojii, ndị ọrụ uwe ojii, tụgharịrị nke ọma ihe ga - eme ka ịgbanye igwefoto mgbe niile na ime nke ahụ nwere ike iju gị anya ma ọ bụ tinye ya n'ọrụ, dịka mgbe ịchọrọ onye na - enyo enyo na - atụghị anya ya.
Fọdụ nwere ike jụ ikwenye na nsogbu ndị uwe ojii anaghị atụgharị igwefoto ahụ ha n'oge dị mma ka igwefoto kwesịrị ịdị na-aga mgbe ọrụ onye ọrụ. Nke a ga-ekwe omume na teknụzụ. N'oge ule nyocha izizi nke akpapụtara na nsonaazụ nke igwefoto ahụ uwe ojii, nke mere na Rialto, California, a na-eji igwefoto nwere ndụ batrị nke oge 12 ọ bụla, ọ bụ ezie na ndị ọrụ na-esonye na nnwale ahụ achọghị ka ịnweta kamera ma ọlị. ugboro.
Teknụzụ, ndị ọrụ nwere kamera ahụ nwere ike ịnwe ngwaọrụ ha n'oge mgbanwe; enwere nnukwu nsogbu na ihe a chọrọ.
Nke mbu, ndi uwe ojii kwesiri inwe ihe nzuzo nzuzo obu ebe oru. Ọha kwesịrị ijide ndị uwe ojii n'ụkpụrụ dị elu ma chee eziokwu na ndị eziokwu site n'aka ndị mmanye iwu, mana ọ ka bụụrụ ndị uwe ojii kwesịrị ịgwa ibe ha okwu n'ụgbọ ala ndị uwe ojii banyere ngalaba chitchat na isiokwu ndị ọzọ na-enweghị ụjọ nke ndị otu ọha na eze nwere ike ịrịọ ndekọ vidiyo nke mkparịta ụka.
Nke abuo, oge ufodu ndi isi uwe ojii gha emekorita ya na ndi ntuputa na umuaka ndi ana ebuso ha agha. Ọ gaghị adị mma ka ndị uwe ojii mee nyocha ya. N'ezie, n'oge ndị ọrụ Rialto na-anwale ndị ọrụ jụrụ ka ha ghara itinye kamera ahụ ha mgbe ha na-eme ụdị ihe ahụ.
Okwu ndị a na-ebilite nchegbu banyere amụma chọrọ ndị uwe ojii ndị ahụ nwere igwefoto ahụ mgbe niile n'oge ọrụ ha. Ọ bụla ezigbo uwe ojii igwe mmadụ nwere ike ịchọ ka igwe onyonyo oge niile.
Enwere ike na ngalaba ndị uwe ojii ga-enye ndị ọrụ ha ọnụọgụ igwefoto nwere igwe mmadụ buru ibu. Ka o sina dị, iwepụta igwefoto ndị a ga-agbakọrịrị na atụmatụ echere nke ọma nke igwe mmadụ na-eburu n'uche ihe nzuzo ndị nkịtị na ndị ọrụ uwe ojii na nsonaazụ igwefoto ahụ nwere ike inwe na ndị ọrụ mmanye iwu na-arụ ọrụ ha. Atumatu igwefoto ndi uwe ojii ga-amatakwa mkpa ndị uwe ojii ga-adị, ekwesịrị ịhazi ya na ụlọ nyocha nke onye kwuo uche ya
N'ebe a, anyị mechiri mkparịta ụka anyị na njedebe nke njedebe na ojiji nke iji igwefoto uwe ndị uwe ojii mebiri emebi bụ ihe dị mkpa. O nwere ike inwe ezigbo nchekwube site na ihe nkiri obodo. Tinyegharịa ugboro ugboro ga-apụta na a ga-edekọ ọrụ ndị uwe ojii kwa ụbọchị, ha ga-aza ajụjụ zuru ezu maka omume ha. Mana ọ ga - apụta na ọtụtụ ndị otu, ndị na - enweghị nsogbu gbasara mpụ, ga - edekọ na fim ma nke a ga - abụ nkwụsị na - enweghị isi na nzuzo ha. Igwefoto ahụ na-eyi na-ewulite nchedo nzuzo na nchekwa nke ndị na-abụghị ndị sonyere na mpụ ahụ kama ha na-abịa na ọkwa nke ụlọ ọrụ mmanye iwu na mgbe ụfọdụ ha na-egbu mgbu n'enweghị ihe kpatara ya. Yabụ, a ga-echedo nzuzo nke ndị dị otú ahụ.
Nzuzo 5620 1 Echiche Taa